No username selected.	 Username ရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။	 Details
2020-10-20 12:08:33 GMT
User already has permissions for this survey.	 အသုံးပြုသူအား ဤစစ်တမ်းအတွက် ခွင့်ပြုချက် ပါမစ်ရှင်များပေးထားပြီးသား ဖြစ်သည်။	 Details
အသုံးပြုသူအား ဤစစ်တမ်းအတွက် ခွင့်ပြုချက် ပါမစ်ရှင်များပေးထားပြီးသား ဖြစ်သည်။
2020-10-20 12:09:41 GMT
CSS framework CSS	 Details
CSS framework name	 C S S framework အမည်	 Details
C S S framework အမည်
2020-10-20 12:12:03 GMT
Files CSS	 Details
The email address is invalid. It was not updated.	 အီးမေးလိပ်စာ မှားယွင်းနေပါသည်။ အီးမေးလိပ်စာအသစ် ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်ရသေးပါ။	 Details
အီးမေးလိပ်စာ မှားယွင်းနေပါသည်။ အီးမေးလိပ်စာအသစ် ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်ရသေးပါ။
2020-10-20 12:13:35 GMT
SPSS v16 or newer	 SPSS v16 သို့မဟုတ် ၎င်းထက်ပိုပြီး မြင့်သော	 Details
SPSS v16 သို့မဟုတ် ၎င်းထက်ပိုပြီး မြင့်သော
2020-10-20 12:14:23 GMT
SPSS prior to 16 / PSPP	 Details
Valencian	 Valencian	 Details
2020-10-20 12:15:15 GMT
2020-10-20 12:15:47 GMT
2020-10-20 12:15:52 GMT
2020-10-20 12:15:57 GMT
Please note that if you delete an incomplete response duringarunning survey, the participant will not be able to complete it.	 စစ်တမ်းကောက်ယူနေဆဲ ကာလအတွင်း ဤမပြီးပြည့်စုံသေးသော စစ်တမ်းအဖြေများကို သင်ဖျက်လိုက်မည် ဆိုပါက စစ်တမ်းဖြေဆိုသူအနေဖြင့် ၎င်းစစ်တမ်းပြီးဆုံးအောင် ဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။	 Details
စစ်တမ်းကောက်ယူနေဆဲ ကာလအတွင်း ဤမပြီးပြည့်စုံသေးသော စစ်တမ်းအဖြေများကို သင်ဖျက်လိုက်မည် ဆိုပါက စစ်တမ်းဖြေဆိုသူအနေဖြင့် ၎င်းစစ်တမ်းပြီးဆုံးအောင် ဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
2020-10-20 12:17:31 GMT
Bypass token with failing email addresses:	 Details